Kaamirooyinka Ciidamada Booliska iyo Asturnaanta | Xalka OMG
Markii booliisku ay kormeeraan Mareykanka si taxaddar leh ay u arkaan dadka deggan ee ay ku shaqeeyaan, xafiisyo badan ayaa qaadaya kamaradaha qaaliga ah si ay uga warbixiyaan wadashaqeynta ay la leeyihiin dadka guud ahaan. Booliiska iyo u dhaqdhaqaaqayaasha xuquuq isku mid ah waxay aaminaan dhacdooyinka taariikhiga ah ee ilaalada inay gacan ka geysan doonaan yareynta xumaanta ka dhanka ah saraakiisha sida kor loogu qaadayo sida tooska ah ee ay bilaysku ula dhaqmaan dadka deegaanka. Markay sidaa ahaato, warbixin la soo saaray toddobaadkan hadda ayaa ka hadleysa inta xafiis ee shuruudaha sharciga ah ay ogaysiinayaan furitaanka ku saabsan adeegsiga kaamirooyinka – iyo duubista ay uruursanayaan.
Saameynta Kaamerooyinka Jirka ee Dadka iyo Heerka Dembiga:
Kaadhadhkii ugu dambeeyay ee muuqaalka jirka la gashado ee Shirka Hogaaminta ee ku saabsan Xuquuqda Aadanaha iyo Xuquuqda Aadanaha, iyadoo la shaqeyneysa hal-abuurnimo iyo la-talin qaab-dhismeedka shirkadda Upturn, waxay fiirisay 50 booliis Mareykan ah waxayna u muujisay inay ku xanuunsan yihiin qayb weyn oo ka mid ah sideedda shuruudood ee baaritaanka. Astaamahaasi waxay ka kooban yihiin sida ugu wanaagsan ee booliisku ay u ilaashadaan kuwa ay wax qorayaan, iyadoo aan loo eegin in saraakiisha loo oggol yahay inay baaritaan ku sameeyaan filimka ka hor intaan la diiwaan-gelin warbixintooda, illaa iyo inta duubista la hayo iyo haddii dadka waaweyni ay arki karaan filim ay ku muujinayaan. Ururo sinaan oo kala jaad jaad ah oo bulshada ah, dhiirrigeliyayaal amniga ah iyo ilo wareed ayaa aasaasay aasaaska bishii Maay 2015 si ay saameyn ugu yeeshaan sida xafiisyadu u fuliyaan ugana faa'iideystaan ​​hal abuurka.
Qayb kamida midkoodna ma helin darajo gudbis dhammaan fasalada oo dhan. Runtu waa in loo sheegaa kaliya 13 marshal meelo badan, sida Wade Henderson, madaxweynaha iyo madaxa Shirweynaha Hogaaminta, dallad xorriyadda bulshada ayaa ku xardhan 1950 si ay ula hadasho ururada kala duwan oo ay ka mid yihiin NAACP iyo ACLU. Xafiisyada booliis ee Ferguson, Mo., iyo Fresno, Calif., Way dayaceen inay fuliyaan shuruudaha mid kastoo ay doonaan ha ahaadeene. Ferguson wuxuu soo jiitay tixgelinta adduunka labo sano ka hor markii booliis halkaas si xun u toogtay da’yarka Mareykan-Amerikanka ah ee aan hubeysneyn Michael Brown, taasoo dhalisay in guud ahaan dalka laga doodo qaabka loo oggolaanayo sharci u daweynta dadka laga tirada badan yahay.
Walaacyada ku saabsan isticmaalka kaamirooyinka jirka:
Kooxaha xuquuqda madaniga ayaa intaa dheer inay ka walwalaan in barnaamijyada cilmiga biometistikada oo leh awooda garashada wajiga loo adeegsan karo in lagu kala saaro shakhsiyaadka filimka kamarada, iyo dhibcaha dhibcaha sideedaad ee darajada darawalnimada waaxda ay kuxirantahay waxay kuxirantahay haddii ay ku baaqayaan in la jabsado qodobbada loo adeegsado biometures. Hal-abuurka la filayo inuu si dhakhso leh ugu arko dadka kaamirada leh waxay ubaahantahay isku-darka awood u adeegsiga, xisaabinta iyo nolosha batteriga ee aan wali jirin — hase yeeshe taasi si dhakhso ah ayey isu beddeli kartaa iyadoo Taser International iyo hal-abuurka kale ee kaameeradda jidhku ay korayaan awoodo wax-ku-dhiigfuran. Waxa intaa ka sii badan, garashada wajiga ah ee sawirrada la iska fogeeyay sida hadda jira.
Kooxaha xuquuqul insaanka ayaa ka baqa bilayska inay u adeegsadaan kaamirooyinka sidii ay u nadiifin lahaayeen qalabka wax lagu daawado inta ay daawanayaan xaafadaha laga tirada badan yahay, ayuu yiri Henderson wareysiga dadweynaha. Xafiisyo dhowr ah ayaa ka fal celiyay walwalkan iyagoo ku khasbay tilmaamo si ay u xakameeyaan daadinta muuqaalka wajiga-ka hor inta aan la soo marin. Waaxda Boliiska Baltimore waxay ahayd tii kaliyah sanad ka hor shirki hogaaminta ugu horaysay ee Hogaaminta Shirka kaas oo istiraatiijiyaddiisa hada ay qasbeyso baaritaanka filimka. Calaamadda ugu dambeysa ee Shirka ayaa muujisay in booliiska degmada Baltimore County, Boston, Cincinnati, Montgomery County, Md., Iyo Parker, Colo., Ay sidoo kale leeyihiin xayiraad biometeri dheeraad ah sidoo kale.
James Coldren, oo ah maamulaha barnaamijyada sinnaanta ee CNA Institute for Research, oo ah urur cilmi-baaris aan faa'iido doon ahayn iyo urur baaritaan ayaa yiri. Waxay u egtahay waxkastoo kale. Biyo-weelka ayaa arrinta sameyn kara haddii aan la xakameyn ama la hubin oo shakhsiyaadka leh ujeeddooyin aad u xun ayaa arrintaas u isticmaali kara. ”Coldren iyo William Sousa, madaxa Xarunta Dembiyada iyo Caddaaladda ee Jaamacadda Nevada, Las Vegas, ayaa wada baaritaan. Qeybta Booliska ee Magaalada Las Vegas ee barnaamijka tijaabada muuqaalka kamaradaha jirka lagu xiro. Kama aysan qeybqaadanin daraasada Shirka Hogaaminta hadana waxay ku ogaadeen sahamadooda in, kadib markii carqalado salka ku haya, xafiisyada booliiska ay casuumayaan kaamirooyinka jirka xiran. “[Magaalada Las Vegas] qeybtani waxay ogaatay in duubista ay faa'iido u leedahay daacada iyo kuwa xun ee masuuliyada saaran,” ayuu yiri Coldren.
Marka laga soo tago waxa socda, arrimaha kaladuwan ayaa ka sii dhufanaya marka loo eego cilmiga noolaha, ayuu yidhi Michael White, oo ah macallin cilmiga dambiyada ka dhiga Jaamacadda Arizona State kaasoo sahamiyay kaamirooyinka jirka xirtay ee Laanta Cadaaladda Mareykanka (DoJ). "Waxaan maqlay xoogaa wadahadal ah oo ku saabsan suurtagalnimada [adeegsiga cilmiga noolaha] laakiin anigu garan maayo wax urur ah oo si dhaqso ugu kacaya jidkaas waqtigan xaadirka ah." Shuruudaha ay ku yaalliin Xarunta Shirka Hoggaamintu, kuwa ugu badan waxaa ka mid ah marka ay masuuliyiintu diiwaan geliyaan. iyo sida ay u ilaashadaan maaddooyinka 'ilaalinta gaar ahaan kuwa khaladka ay ka faa'iideystaan ​​dadka. Dhibaatooyinka amni ee noocan oo kale ah ayaa soo shaac baxay iyada oo xafiisyada qaar ay kanaalada YouTube ka dhigaan duubitaankooda.
Walaacyada ku saabsan maalgelinta kaamirooyinka:
Qeybo badan ayaa tixraacaya qiimaha iyada oo caqabad ku ah ka faa'iideysiga hal abuurka. Kaamirooyinka laftooda waxay ku kordhin karaan qiime ahaan $ 300 illaa $ 800 halkii sarkaal, iyadoo lacago aad u badan oo doolar ay si isdaba joog ah ugu kharash gareeyeen bil ilaa bil kaydinta fiidiyowga waqti ka dib. Kharashaadka waa wax aan jirin laakiin waa adag tahay in la hubiyo: qalabka, diyaarinta iyo kaydinta macluumaadka. Maalgalinta maalgashiga, tusaale ahaan, hoos udhaca sheegashada ama xiriirinta shabakad yar ee shidaalka ah, hadey ahaan laheyd, ma ahan wax sahlan in la qiimeeyo, ayuu yiri White, maamulaha guud ee koox tababarata kana caawiya kala duwanaan xafiisyo oggolaansho sharci oo mashruucan kamarado ah waxaa maalgeliyey Barnaamijka Fulinta ee Caawinta Caddaaladda ee DoJ (BJA) ee Barnaamijka Fulinta Pilot. Si kastaba ha noqotee, White wuxuu qabaa malaha qayb ka mid ah kharashyada ayaa laga hor tagi doonaa. “Qaar ka mid xafiisyada booliiska ee sida weyn u shaqeeya waxay si joogto ah u bixiyaan $ 10 ugu yaraan milyan sanadkii sanadkii dacwada caadiga ah,” ayuu yidhi. "Marka ay fursadda ka baxdo in kaamirooyinka jirka gashaa ay dhintaan tiradaas, taasi waa rajo wanaagsan."
BJA waxay adeegsanaysaa calaamaddeeda gaarka ah si ay u qiimeyso dariiqa kamaradaha waaxda iyagoo adeegsanaya shuruudaha 17 ee waajibka ka ah kabida, oo ay kujirto in saraakiisha loo sheego goorta ay u baahan yihiin inay dhaqdhaqaaqaan kaamirooyinka jirkooda iyo sida si badbaado leh loogu soo duubi karo duubista kombuyutarada PC-yada. Waxaa jira caddeyn macquul ah oo qabanqaabooyinkan ay aqbalayaan baaritaankan oo kale: BJA waxay si rasmi ah uga takhalustay in ka badan $ 19 milyan xafiisyada 73 ee dalka oo dhan si ay u iibsato qaababka kamaradaha qaaska ah u labisan.
Kaamirooyinka Ciidamada Booliska iyo Asturnaanta ahaa kii ugu dambeeyey: September 26th, 2019 by admin
2611 Wadarta Views 4 Views Maanta
Ciidanka Boliska ee Kaamirooyinka Soo Kordhiyey Welwelka Amniga iyo Arimaha gaarka ah
Kordhinta welwelka ku saabsan amniga iyo asturnaanta booliska…